Ejipta: Sampam-pitsikilovan’ny Marionety · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Sampam-pitsikilovan'ny Marionety
Voadika ny 17 Janoary 2014 18:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, English, عربي, English
Nizara roa ny efijerin'ny fahitalavitra nandritra ny fandaharana iray tamin'ny tafatafa (talk-shows) malaza tao Ejypta. Marionety maka endrika Olo-malaza iray no nibahana ny atsasaky ny efijery, raha ny eo amin'ny ilany kosa tanora mandrahona hanipy ilay saribakoly ahetsiketsika (marionety) any am-ponja. Nitana ny andraikitry ny fandaminana azy roa ireo, dia i Abla Fahita ilay saribakoly sy i Ahmed Spider ilay tanora mpiahiahy fisiana tsikombakomba, ny mpanolotra ny fandaharana.
Jereo ny voamasobean'ny fampihorohoroana, via @SooperMexican
Mahafinaritra ny seho tahaka izao raha fampisehoana manesoeso, saingy tsy izany. Nametraka fitoriana tamin'ny fomba ofisialy an'i Vodafone Ejipta sy tamin'i Abla Fahita, izay nipoitra tamin'iray tamin'ireo dokambarotr'izy ireo i Ahmed Spider, niampanga azy ireo ho nandefa hafatra miafina hoan'ireo mpampihorohoro tao anatin'ny dokambarotra. Nalefa tany amin'ireo mpampanoa misahana ny fiarovam-pirenena ilay fitoriana avy eo, izay misahana ireo tranga mikasika ny fampihorohorona sy fanohintohinam-pilaminana. Ka nataon'ireo mpampanoa famotorana ireo tompon'andraikitra tao amin'ny Vodafone Ejipta. Efa manana ny lisitry ny ahiana ho mpitsikilo ahitana voromailala, takatra, ary antsantsa miaraka amin'i Abla Fahita, ilay saribakoly sy ny zanany vavy, Carolina, antsoina hoe Carcoura i Ejipta. Vokatr'izany, hoy i Paul Sedra nisioka:
Amin'ny famotorana an'i Abla Fahita, mifaninana amin'i Korea Avaratra indray i #Ejypta amin'ny fiadiana ny anaram-boninahitry ny firenena be fiahiahiana indrindra eto an-tany
Tsy afa-nidila tamin'izany vaovao izany tamin'ny esoeso ireo mpiserasera Ejipsiana.
Raha misy olona avy ao amin'ny fahitalavitra miantso hangataka hampiasa ny Zanaky ny sakanao hanaovana ny dokambarotr'izy momba ny finday, dia hanenjika azy ireo i Ejipta: Ny zavatra manaraka fantatrao, hiakatra fitsarana ny saka
Nevine Zaki namazivazy an'i Abla Fahita, ary niantso azy ho Che Guevara an'ny vanim-potoanantsika.
Abla Fahita naseho tahaka an'i Che Guevara – via @khlud_hafeez
Nisioka momba ilay saribakoly, izay manana mpankafy maherin'ny 1 tapitrisa ankehitriny ao amin'ny Facebook ary tsy ambany noho ireo olomalazan'ny revolisiona, i May Sadek sy Pakinam Amer.
‘F’ ho amin'i fahita. Tsy dia henjana tahaka an'i «V» ho amin'ny valifaty .. Saingy ho vitany tsara ny asa.. # ablafahita
Tokony hitarika ny revolisiona manaraka i Abla Fahita. Izy no ho V antsika. Fijoroana tsy manan'endrika. # # 3abath #Surrealism
Miely ny tsaho fa mitady fialokalofana amin'ny fampisehoana marionety na araben'ny majika i #ablafahita.
Mitohy ny fanehoan-kevitra manaraby amin'ny sary mampihomehy ao amin'ny media sosialy.
Nanavotra izao tontolo izao tamin'ny fandrahonana fampihorohoroana goavambe tsy mbola fahita hatramin'ny nanandraman'ireo Marionety haka an'i Manhattan i #Ejypta #AblaFahita
Naka an'i Manhattan ireo Marionety
#Ejypta: Mandrakitra ireo antso an-tariby sy resaka amin'ny Facebook ifanaovan'i #AblaFahita & Mickey Mouse ankehitriny ny Minisiteran'ny Atitany!
Taorian'ny tsy fahombiazan'ny marionety Vodafone, mbola misy olona mora tohina kokoa manaja ny governemantan'ny fanonganam-panjakana ve any ho any?
Nahatonga an'ny The Economist ho amin'ny “Vanim-potoana Vendrana ao Ejypta” ny tantaran'i #AblaFahita
I Bob ilay spaonjy velondrirana indray no andrasana ho voarohirohy manaraka. Nisy ny fanontanina napetraka tao amin'ny Google Ejabat izay manontany raha mpikambana ao amin'ny mpirahalahy miozolomana ny sary-olona nampiasaina tamin'ny sarimiaina noho ilay loko mavo sy manana rantsana efatra izay tahaka ny fanevan'i Rabia mihitsy.
Fangon'i Raba, via @Rassd_Now
Namorona fango amin'ny endriny hafa ireo mpiserasera media sosialy sasany noho ny tahotry ny ho voasambotra amin'ny fampiasana ny fangon'i Raba ho sarintavan'izy ireo [taorian'ny fandraràn'i Ejypta ireo mpirahalahy Miozolomana].
Fangon'i Raba amin'ny endriny hafa, @nsfadala
Tamin'ny fanamarihana matotra kokoa i Mohamed Elgohary no manontany raha manery ny Vodafone Ejipta hampandoa vola any antakonana ny governemanta Ejipsiana amin'ny fampiasana ity raharaha ity:
Earlier in November Bloomberg published that “Telecom Egypt May Buy Vodafone Local Division When 4G Is Offered“. Personally I don't want for this acquiring to happen, since it will decrease/eliminate competition in mobile/4G emerging market .. The million dollar question here, as Vodafon.e actually wants to buy the government stakes, is this BS accusation a dirty step for blackmailing/forcing Vodafone Egypt to comply to what the government wants?
Tamin'ny fiandohan'ny volana Novambra, namoaka ny Bloomberg fa «Mety Hividy Ny Vodafone Ny Telecom Ejipta Rehefa Azo Ny 4G”. Ho ahy manokana, tsy tiako hitranga ny fahazoany izany, satria hampihena / hamafa ny fifaninanana amin'ny firoboroboan'ny tsenan'ny finday/4G. Fanontaniana mitentina an-tapitrisa dolara eto, raha te-hividy marina ny anjaran-drenivolan'ny fanjakana ny Vodafone, ity fiampangana BS ve ity ve no dingana maloto handrahonana/hanerena ny Vodafone Ejypta mba hifanaraka amin'izay tian'ny governemanta?
Manontany tena i Kazeboon hoe inona ny raharaha sokafan'ny mpitsara anaovana famotorana ary inona ny raharaha tsy raharahiany Namoaka ity sary manaraka ity ihany koa ny pejy Facebook-n'i Kazeboon, manontany izay raharaha hanaovan'ireo mpampanoa famotorana sy izay tsy ataony famotorana.
Raha nitaky ny hanokafana famotorana mikasika ny Vodafone [Ar] ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona taorian'ny fandraisam-peo [fihainoana] tsy ara-dalàna ka ireo mpikatroka indray no nolazain'ny fiarovam-pirenena, saingy tsy noraharahian'ny mpitsara izy ireo, fa taitra raha niantso ny hanaovana famotorana ilay orinasa io ihany i Spider noho i Abla Fahita, avy eo tsy mampaninona ny milaza an'i Ejipta ho Fampisehoana Marionety. (via Kazeboon)
Sarah Carr nampitaha an'i Ahmed Spider amin'i Glenn Beck tao amin'ny bilaoginy mikasika ny raharahan'i Abla Fahita :
Samy manana ny olo-malazany tahaka an'i Glenn Beck avokoa ny firenena tsirairay, ny mahahafa ny ao Ejypta dia raisina ho tena matotra izy ireny raha mifanaraka amin'ny faniriana politikan'ireo eo amin'ny fitondrana sy mampiasa izany amin'ny tombotsoany. Hatreto isika manana manana mpampanoa lalàna manaiky ny fitoriana ilay marionety raha toa ka tsy nisy olona voampanga tamin'ny fahafatesan'olona manakaiky ny 1 000 tao Rab3A, satria saika fasista ny fomba toetra manjaka ankehitriny amin'ny fankatoavana fanjakana sy amin'ny fanjakazakan'ny fanjakana tanteraka ary amin'ny mpanohitra ny fanjakana hajedaka. Raha nisy ny pejy mitovy amin'ny “We Are All Khaled Said (Khaled Said Daholo Izahay rehetra” dia mety hivadika hoe “We Are All Adolf Hitler (Adolf Hitler Avokoa Izahay Rehetra) izany ankehitriny. Matetika miaradalana ny voina sy ny seho mampihomehy.
Farany, Holly Dagres nisioka hoe:
Na dia nampihomehezin'i Abla Fahita tsara aza isika, dia tsy tokony hampiala ny fifantohantsika amin'ny @Repent11 sy ny mpiasan'ny AJE sisa any am-ponja izany